PHOTOS. Sannadihii 54, Anthony Delon wali wuxuu soo bandhigayaa muuqaal jir ah inta lagu gudajiro fasaxa jannada ee Bermuda - TELES RELAY
ACCUEIL » DADKA & LIFESTYLE PHOTOS. Markii uu jiray 54 sano jir, Anthony Delon wali wuxuu soo bandhigayaa muuqaal jir ah inta lagu gudajiro fasaxa jannada ee Bermuda
PHOTOS. Markii uu jiray 54 sano jir, Anthony Delon wali wuxuu soo bandhigayaa muuqaal jir ah inta lagu gudajiro fasaxa jannada ee Bermuda
Ciidaha ayaa sii soconaya Anthony Delon. Dhowr maalmood kadib booqashadii Kanada, the ina Alain Delon u duulay Bermuda. Qorrax ka soo dhacda qorraxda Atlanta, wuxuu ku raaxeysanayaa farxadda jasiiraddan: ku dul orodka barafka, dabaasha badda, dalxiis doon ... ... Sanadihii 54, waxay had iyo jeer soo bandhigaan jir xardhay iyo maqnaansho maqan. Kufiican in la yiraahdo sanadaha kama muuqato inay ku hayaan xiisihii galmada ee walaalkii weynaaAnouchka iyo Alain-Fabien Delon.
Bermuda, Anthony Delon xitaa wuxuu ku raaxeystay walaalkiis ka yar isagoo u wacaya ... qolof leh! Kaftan loogu jawaab celiyay qosol badan jacaylka Capucine Anav. Iyo ciidaha, wiilka curadka ahAlain Delon uga faa'iidayso si ka sii badan sidii uu rabitaanku ugu noolaa toddobaadyo qalafsan kahor intuusan bixin. 14 bishii Juun ee la soo dhaafay, u dhaw ku dhawaaqay in majaajiliistaha 83 sanadood uu ku dhacay istaroog, ka hor inta aan loo qaadin Cisbitaalka Maraykanka Neuilly. Kadib riwaayaddii ugu horreysay ee ku dhawaad ​​qiimaha nolosha xiddigta filimka, wiilkiisa Anthony Delon wuxuu ka baqay daawo-daaweyn aan naxariis lahayn.
Caafimaadkiisuna ugu dambeynti wuu fiicnaaday, illaa uu jilaayuhu la kulmay labo istaroog oo cusub, ka dibna dhiig-baxa maskaxda. Tan iyo laba bilood, Alain Delon isbitaalka kama uusan bixin. Ka dib markii lagu wareejiyay Pitié Salpêtrière habeenkii 10 ee 11 bishii July ee la soo dhaafay, isaga "Nasasho" Rugta caafimaad ee ku taal Genolier, Switzerland. Doorashada gabadhiisa, Anouchka Delon, taas oo labadiisii ​​wiil ay ka soo horjeedeen. Wiilka curadka ah ee jilaa, waa ee uu aamusnaan wuxuuna u sheegay aabbihiis. "Waa uu nasan doonaa", ayuu yidhi. Marka laga hadlayo howlaheeda muhiimka ah, iyagu waa "Dawlad hagaagsan oo xasilloon, sida ay sheegeen dhakhaatiirta".
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.closermag.fr/people/photos-a-54-ans-anthony-delon-affiche-toujours-un-corps-sculpte-pendant-ses-vaca-1013173
William Shatner mar wuxuu ciyaaray jaceylka Jo - dadku
Dagaaladii Amiir Philip: Sidii Duke u Dhacey sanadihii hore sidii boqoradda boqoradda